Ifulethi kufutshane nendalo - I-Airbnb
Ifulethi kufutshane nendalo
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguDorita
Indlu entle ikwindlu esihlala kuyo. Inomnyango wayo wokungena.
Le ndlu inendawo engaphandle enegrill kunye nesitya somlilo-enombono omangalisayo phezu kwamadlelo aseMecklenburg kunye namahlathi. IiCranes zihlala zibonwa kwaye zivakale kwindawo ekufutshane.
Ifumaneka kumda wepaki yendalo yaseSternberger Seenland kwaye ingekude kwintlambo yaseWarnow, kukho iindawo ezininzi zokundwendwela kwabo banomdla kwindalo, ubugcisa kunye nobugcisa kunye nembali.
Le ndlu inegumbi lokuhlala elihle / igumbi lokulala, ikhitshi elikhulu lokutyela kunye negumbi lokuhlambela elitsha elenziwe.
Kuthe cwaka kakhulu kwilali yethu encinci.
Kukho iivenkile ezikumgama weekhilomitha ezi-3 ukusuka kwivenkile yelali eWarnow (impahla yemihla ngemihla, izinto ezibhakiweyo ezintsha, ukhetho oluncinci lwezinto ezikhethekileyo zengingqi kunye nezinto eziphilayo, ikhefi encinci) okanye kwiivenkile ezinkulu kwiidolophu ezincinci ezilandelayo (eBützow, eSternberg).
Iindawo zohambo kwindawo ekufutshane umz.: iBoitiner Steintanz, i-Archaeological Open-Air Museum iGroß Raden, irenti yezikhephe ezibhexwayo kwilali yendalo yase-Eickhof, ilali yaseRothen yobugcisa kunye nemisebenzi yezandla.
Kuthatha malunga neekota ezintathu zeyure ukuya kuLwandle lweBaltic kunye nezixeko zaseRostock, eSchwerin naseWismar.
Kukho iindawo zokutyela ezilungileyo kunye neekhefi kule ndawo.
Ukuba unomdla kwizilwanyana, ufikile kwindawo efanelekileyo. Sifuya amadada kunye neenkukhu. Ngelishwa, awukwazi ukuzisa naziphi na izilwanyana kunye nawe, kuba inja yethu ayithandi ezinye izinja okanye iikati.
Umbuki zindwendwe ngu- Dorita
Ekubeni ndiphethe ivenkile yaselalini kwidolophu eselumelwaneni, ndinokufikelelwa kuze kuthethwe ekhaya emini nangokuhlwa ukuba ndiyathanda.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Warnow